Qaar kamid ah Dugsiyada Gobolka Banaadir oo eedayn usoo jeediyay wasiirka waxbarashada XFS - Tilmaan Media
Qaar kamid ah Dugsiyada Gobolka Banaadir oo eedayn usoo jeediyay wasiirka waxbarashada XFS
in SOOMAALIYA, BULSHO
War Saxaafadeed ay soo saareen dugsiyada gobolka Banaadir gaar ahaan kuwa ku mideysan dallada waxbarashada SAFE ayaa cambaareyn u jeediyay Siihayaha wasiirka waxbarashada Cabdulaahi Goodax Barre ee ah inuu natiijadii ay imtixaanka dugsiyada sare uu dusha ka saaray Dugsiyada, Macalimiinta iyo Ardeyda gobolka Banaadir.
Dugsiyada gobolka Banaadir ayaa waxa ay warsaxaafadeedka amaaneen Mas’uuliyiinta iyo Aqooyahanada Soomaaliyeed oo si adag uga jawaabay Mas’uuliyad darada ay ku dhaqaaqeen Mas’uuliyiintii wasaaradda iyo Xafiiska Waxbarashada Gobolka Banaadir.
Halkan hoose ka aqriso War Saxaafadeedka ay soo saareen Dugsiyada gobolka Banaadir;
DUGSIYADA GOBOLKA BANAADIR WAR-SAXAAFADEED WADAJIR AH
Dugsiyada Xubnaha ka ah Dalladda Waxbarashada ee SAFE ee gobolka Banaadir waxay manta muujinayaan garab-istaagga buuxa ay garab-taagan yihiin ay na soo dhaweynayaa war saxaafadeedka ay soo saartay Dalladda waxbarashada ee SAFE iyo cid kasta danqasho u muujiyey ardeyda gobolka Banaadir dhamaan heer kasta ay bulshada ay ka joogaan.
Waxaan ku amaanaynaa Mas’uuliyiinta iyo Aqooyahanada Soomaaliyeed oo si adag uga jawaabay Mas’uuliyad darada ay ku dhaqaaqeen Mas’uuliyiintii wasaaradda iyo Xafiiska Waxbarashada Gobolka Banaadir.
Waxaan Cambaareynaynaa falcelinta ay ka sameeyeen iyo ku adkeysashada qaladka weyn ay ka galeen ardeyda iyo dugsiyada gobolka Banaadir: Sii haayaha Wasiirka Wasaaradda Waxbarashada iyo Agaasimaha Waxbarashada gobolka Banaadir oo qaladka dusha ka saaray Dugsiyada, Macalimiinta iyo Ardeyda gobolka Banaadir.
Waxaa is ka cad in ay ka muuqato tayo xumo, Mas’uuliyad daro weyn iyo daneysi, maxaa yeelay wasiir macalimiin ajnabi amaanaya kaba siidaran dowlad xafiiltan iyo dagaal siyaasadeed, mid dhaqaale iyo mid deegaan nagu haysa ayuu amaanayaa; Macalimiintii qaranka soomaaaliyeedna meel ayuu uga dhacay.
Hadda Ma Kenya ayuu Wasiir ka yahay?mise dano Kenya ay leedahay ayuu fulinayaa? Iyo Mas’uulikii waxbarashada gobolka Banaadir isla saacadii ay war saxaafadeedka soo saartay SAFE ayuu ka jawaabay asagoon, baaritaan,hubin, dabagal iyo qiimey sameyn ayuu eeda dusha ka saaray Maamulayaasha dugsiyada gobolka Banaadir.
Wasaaradaha Xukuumadda Soomaaliya, wasaarad shaqadeeda si buuxa u diyaarsan oo inta burburka jiray shaqadii laqabtay oo dhameystiran gacanta laga saaray waxaa ka jirta Wasaaradda waxbarashada.Hab dhaqanka ay la soo baxday ma ahan calaamad horumar tilmaamaysa.
Waxaan ku kalsoonahay kuna faaneynaa tayada iyo kartida macalimiinteena iyo ardeydeena, laakiin malaga yaabaa mas’uuliyiintaas in aysan wax fikir ah ka heysan miisaanka lagu cabiro tayada.
Waxaan Mar kale Baaq ku aadan mustaqbalka ardeydaas iyo mas’uuliyad darada ay wali ku adkeysanayaan mas’uuliyiintaas kor kuxusan u direynaa:
1. Madaxweynaha Jamhuuriyadda FS,Mudane: Maxamed Cabdulaahi Farmaajo
2. Sii haayaha xilka R/wasaaraha JFS, Mudane Mahdi Maxamed Guleed “Khadar”
Waxaana shaki weyn na geliyey aamusnaanta dheer madaxdeena dalka oon wali mowqifkooda ku aadan arimahaas masiiriga ah war ka soo saarin. Hadana waxaan kalsooni buuxa ku qabnaa in talaabada ku haboon ay qaadi doonaan.
Taliyaha ciidamada AMISO oo booqday talisyada ciidamada AMISOM
Dowladda Federaalka oo kadigtay fatahaado
Guddoomiyihii degmada Hodan ee gobolka Banaadir oo xalay Muqdisho lagu dilay